पूर्वयुवराज पारसका स्वघोषित सहयोगी बाबुरामको पछि किन लागे ?
सोमबार, भाद्र ६, २०७३
२०६५ जेठ १५ को संविधान सभाले देशलाई दलीय तानाशाहीको जालसाजीसहित गणतन्त्र घोषणा गरेपछि ज्ञानेन्द्र शाह हाँसी हाँसी गद्दी त्यागेर नागार्जुन गएपछि अधिकांश पूर्व राजावादीहरु तत्कालीन माओवादीमा धेरै नवक्रान्तिकारी बनेर लहसिए, जसरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि अधिकांस पूर्वपञ्चहरुको नयाँ दरवार नेपाली कांग्रेस बनेको थियो । जसले जे अर्थ लाए पनि हालसम्म नेपाली कांग्रेस वडादेखि बलियो हुनुमा मुख्य कारक शक्ति उसको संघर्षपूर्ण विगत मात्रै हैन, २०४६ पछिका सबै पूर्वपञ्चहरुलाई चार तारे सारथी बनाउन सक्नु पनि एक हो ।
तर संसदीय राजनीतिमा आउन स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हात र साथ अनि उसैको जस्तो रणनीतिक चाल चाल्न खोज्ने माओवादीले ती तमाम पूर्व दरवारियाहरुको नयाँ साथलाई त्यति दिगो र विश्वासिलो बनाउन सकेन । नयाँ जनसमर्थन पाएको नाममा माओवादीले सुन्निएको बेलामा नी मोटाएको अनुभुति ग¥यो । फलतः पहिलो संविधानसभापछिको ९ महिने सरकारबाट जसै प्रचण्ड सत्ताच्यूत गरिए अनि माओवादीमा प्रवेश गरेका धेरै गणतन्त्रवादी पूर्व राजावादीहरु या त शिथिल भए, या त तितरवितर ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो भएको माओवादी दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो हुनुका अनेक कारणहरु होलान, तर त्यसमा उसले नवप्रवेशी कामरेडहरुको रक्षा र जुगाड गर्न नसक्नु पनि एक कारण हो । अहिले घुमीफिरी प्रचण्ड नै गणतन्त्र नेपालको दोस्रो माओवादी प्रधानमन्त्री भएका छन, उनले यसपटक के छलांग मार्छन ? त्यो अहिले अनुमान गरौं, बहसपछि गरौँला ।
तर यसबेला माओवादीबाट पारपाचुके गरेका पूर्व माओवादी उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री र हालका नयांँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईका वरिपरि झुम्मिदै गरेका मान्छेहरु र खासगरी पूर्व दरवारीयाहरुको प्रसंग भने रोचक छ ।
काभ्रेका एक युवा जो थाइल्याण्डमा बसेर व्यवसाय गर्छन र पूर्वयूवराज पारसका सहयोगीका रुपमा पनि स्वतः आफैंले आफैलाई चिनाएका थिए, उनको नयाँ शक्ति पार्टीसँगको एकता र राजनीतिक जीवनको प्रवेश धेरै युवाहरुका लागि स्यानो तथा रोचक प्रसंग हो ।
मेरो सुनिल खड्का भन्ने युवासँग कुनै लाभहानीको सम्वन्ध छैन । तत्कालीन युुवराज पारस थाइल्याण्डको समिति भेज अस्पतालमा हप्तौंसम्म बेहोस भएका बेला माइससारमा मैले लेखेको ब्लग अभागी पारस पढेपछि खडका आफै मेरो सम्पर्कमा आएका थिए । उनले नेपाल आउँदा भेट्छु भन्थे, भेटेनन् । पछि लागेर भेट्ने जांगर चलाइएन ।
अघिल्लो साल पूर्वयूवराज पारस फेरि थाइल्याण्डमा पक्राउ पर्दाताका सुनिल काठमाडौँमा थिए । त्यतिबेला कार्यरत माउन्टेन टेलिभिजनको समाचार प्रमुखका रुपमा मैले उनलाई टेलिभिजन समाचार वा अन्तर्वार्ताका लागि भेटेको हो । बानेश्वरको एक रेष्टुंरेन्टमा सुनिल खड्कासँग करिब पौने घण्टा जति बिताएपछि उनी थुनिएका पूर्वयुवराज पारसका समाचारका लागि अन्तर्वार्ता वा बाइट लिने उपयुक्त पात्र लागेनन् । उनीसँग सामान्य औपचारिकता गरेर हिँडियो । मैले भेटेर निस्कदै गर्दा प्रतिक्षामा रहनुभएका त्यतिबेलाका सेतोपाटीडटकमका गुणराज लुइँटेल खड्कासँग भेटन पुगे । सेतोपाटीमा उनको ठूलै कथा पनि आयो । न्यूज २४ मा पनि खड्का छाए केही दिन । त्यतिबेला खड्कासँग गरेका कुराकानी समाचार नबनाएर मैले ठीकै गरेको अनुभुति त्यतिबेला भयो जब उनले नयाँ शक्तिमा प्रवेशको टुइटे घोषणा गरे ।
समाचारमा यसरी आयो मानौं पूर्वयुवराज पारश अब सुनिल खड्का नयाँ शक्तिमा गएपछि एक्लो भए । र, सुनिल खड्का यस्तो युवा शक्ति हुन जसले अब नयाँ शक्तिलाई उभार थप्छन ।
१) ठीकै हो, देशका लागि केही गरौं भन्ने एक युवा विदेशबाट फर्केर देशमा राजनीति गर्न चाहन्छ भने उसका लागि नयाँ शक्ति वा कुनै पनि अमुक पार्टीले स्वागत गर्नु सामान्य कुरा हो । तर मातृभुमिका लागि युवा लगायत के के जाति संस्था वा दलहरुमार्फत् सक्रिय सुनिल आखिर कमिटीबाट निर्णय नै नगरी किन विलय भएछन नयाँ शक्तिमा ?
२) आफनो टीम, कमिटीमा कुनै बहस र निर्णय नगरी सुनिलले हुकुमी शैलीमा नयाँ शक्तिमा बिलिन भाको तथ्य त सामाजिक संजालमा उनकै सहयोगीले छताछुल्ल पारिसके । के सुनिल आफैलाई प्राधिकारसम्पन्न मान्दा रैछन कि ? यस्तै प्रवृत्ति कपीपेस्ट त होलान् नयाँ घरतिर पनि ?
३) इतिहासले निर्मम हुनुपर्ने कठोर सत्य के हो भने डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी जनयुद्धका नाममा १७ हजार बढीको ज्यान लिएका हुन्। त्यसका एक नेता हुन् ती । संविधान जारीपछि गत असोजमा भटटराईले हजारौं मुसा खाएपछि बिरालो हज गर्न हिडेजस्तै कथित नयाँ शक्तिका नाममा पापको प्रायश्चित गर्न कोशिश गरेका हुन् । अनि के सुनिल खड्का किन त्यस्ताको पछि लागे त मलामी जस्तै ?
४) यदि सुनिल खड्का आम युवाका एक प्रतिनिधि पात्र मानिने हुन भने उनी धर्तीमा हैन, महल र शहरमा मीठा कल्पना गर्ने सपनामुखी राजनीतिका लागि समर्पित युवा मात्रै सावित भाका छन । किनकि राजनीति मीडिया र शहरमा डा. बाबुराम र सुनिलहरुकै फस्टाउने हो । रियल पोलिटिक्स त बस्तीस्तरबाट सुरु हुनुपर्ने हो जो शायद नयाँ शक्तिलाई लागू हुन्न ।
५) यदि सुनिल पूर्वयुवराज पारसका सहयोगी नै हुन भने, थिए भने, के उनले पारससँगको त्यो स्तरको हार्दिक सम्वन्ध पारसलाई पातालमा पुर्याउने दृश्य अदृश्य शक्तिको खेलको गोटी भएर पो गरेका थिए कि ? यस्ता आशंका उनकै चरम पारससेवा र ठयाक्कै रिभर्समा डा. बाबुरामसँगको विलयले नै उठाउँछ नि उठाउँदैन र ? बाबुरामकोे पार्टी सदस्यता र साथ र सारथी हुन सुनिल चेष्टा पारस सिध्याएपछिको पुरस्कार हैन भनेर कसरी पत्याउने ?
६) हिजो कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव डा. केशरजंग रायमाझी नै राजदरवार स्थायी समितिको सभापति भएको अभिशप्त अवसरवादी वाम इतिहास दोहोरयाएका उनै डा. बाबुरामले हुन । उनी चरम क्रान्तिकारीदेखि चरम प्रजातन्त्रवादी हुनु भनेको नयाँ परिवेशमा नयां रायमाझी नै हुन । अनि कसरी उतिविघ्न पारसवादी वा राजावादी वा मातृभूमिवादी सुनिलहरु एकाएक नयाँ शक्तिका आडभरोस र पुञ्ज बन्न सक्छन त ?
७) डा. बाबुरामको नयाँ शक्तिले सुनिललाई पार्टीमा भित्र्याउँदा दिएको महत्व र सुनिलले उनको महान देशभक्ति वा मातृभुमिप्रेम लगेर डा. वावुराममा मिसाउनु भनेको नयाँ जोगीका धेरै खरानीको आख्यानको प्रतिध्वनी होईन भने के भ्रमको राजनीतिका लागि पृष्ठपोषक बन्नु नै युवापुस्तालाई सुनिललले सिकाएको पाठ हो त ?
८) एउटा कथित मातृभुमिप्रेमी पौरखी केटो बाबुरामको सहयोगी बन्ने राजनीतिक जोक्स हामीकहाँ सम्भव छ, अन्त विरलै यस्तो होला ।
९) भारतका कस्ता पात्र हुन डा. बाबुराम ? लोकसँग यो प्रश्नको जवाफ छ । अनि सुनिलको मातृभुमिको समपर्ण बाबुराम मार्फत् कहां गएर थच्चियो त ? बस बुझ्नेहरुलाई यति नै काफी छ ।
पूर्व युवराज पारसको जीवन आफैंमा विरत्तलाग्दो छ । उनले थाइल्याण्ड बसाईमा अस्पतालदेखि जेलसम्मको यात्रा साथी र सहयोगीकै कारण गर्नु परेको तथ्य उनले प्रस्टयाइसकेका छन् । यस्तो बेलामा अब पारसले किन सहयोगीहरु छान्दा वा साथ लिदा ध्यान नदिने त ? यदि सुनिल घोर मातृभुमिवादी र पारससेवक हुन् भने त्यो सबै नक्कली थियो र यदि पारसकै पछि लाग्ने जत्थालाई डा. बाबुरामले भित्रयाएका हुन् भने फेरि सुन्निने रोगबाट पनि नयां शक्ति गाजिएछ भनेर बुझ्दा अतिशयोक्ति नहोला । यदि कसैले सुनिललाई आर्दश मान्थे भने उनी युवा अवसरवाद र शक्तिको भक्ति गाथा बुन्ने घटीया मातृभुमिवादका विम्व मात्रै हुन् ।
त्यसैले राजनीतिमा लाग्न चाहने आम युवाहरुले अब सुनिलहरु ज्स्ता चरम अवसरवादीलाई हैन, आफ्नो थातथलोको भूधरातलीय यथार्थलाई आत्मासात गरेर मात्रै अघि बढ्नु मनासिव होला । यहाँ बाबुराम वा सुनिलहरु केवल भ्रम हुन् ।